मानव सभ्यता भन्दा कैयौं गुणा विकशीत एलियन पुथ्वीको समुन्द्री गहिराईमा हुन सक्ने तथ्य – hamrosandesh.com
मानव सभ्यता भन्दा कैयौं गुणा विकशीत एलियन पुथ्वीको समुन्द्री गहिराईमा हुन सक्ने तथ्य
पृथ्वीका कैयौं स्थानहरुमा विभिन्न समयमा एलियन अर्थात अर्कै ग्रहका प्राणी र उनीहरुको यान देखिएको दावी गरिन्छ । पछिल्लो समय यो विषयको चर्चा धेरै भइरहेको छ किनकि अमेरिकाका खुफिया सरकारी अधिकारीहरुले युएफओ र एलियनको विषयमा गरेको समीक्षा रिपोर्ट लिक भएको छ । यो रिपोर्टमा पछिल्ला २० वर्षमा अमेरिकी नौसेनाले आकाशमा अज्ञात वस्तु देखेका १२० भन्दा धेरै घटनाहरुबारे उल्लेख छ ।
अब एलियनका यी विमानहरु पृथ्वीमा आएपछि कहाँ गायब हुन्छन् ? के यी हाइपरसोनिक विमान हुन् ? भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ । यही बीचमा इन्टरनेशनल कोलिसन फर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिसर्च आइसीइआरका उपाध्यक्ष गेरी हेसेल्टाइनले एलियन अन्तरिक्षबाट नभइ समुद्रभित्रबाट आउने दावी गरेका छन् । २७ देशका युएफओ अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक सम्मिलित संस्था आइसीइआरका उपाध्यक्षको यो दावीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका शोधकर्ताहरुमा तरंग ल्याइदिएको छ ।